उपाधि, सावित्रा र एन्फा - Khelpati
उपाधि, सावित्रा र एन्फा
शुक्रवार, चैत्र ८, २०७५ हिम बिक्रम केसी
पछिल्ला ५ बर्ष घरेलु फुटबलमा ठुला उथलपुथल भए । निरन्तरता र क्रमभंगताको स्वरुपमा पेचिलो शक्ति संघर्ष चल्यो । त्यसले घरेलु फुटबललाई एक हिसाबले तहस नहसै बनायो ।
मैदानभित्रका गतिवविध शुन्य थिए, बाहिर परिवर्तनका नारा चर्का थिए । खेलाडी पलायन भईरहेका थिए, धेरैले फुटबल छाडेर वैकल्पिक पेशा अंगाल्न सुरु गरेका थिए । मोफसलका नकआउट गोल्डकप खेलेरे धेरै राष्ट्रिय टिमका खेलाडीले आफ्नो गुजारा चलाएका थिए ।
त्यसमा महिला खेलाडीको अवस्था अझ दयनिय थियो । घरेलु प्रतियोगिता लगभग शुन्य थिए, अन्तराष्ट्रिय सहभागिताको टुङ्गो थिएन । निराशपुर्ण वर्तमान र अनिश्चित भविष्यलाई लिएर खेलाडीहरु फुटबल कर्म अघि बढाईरहेका थिए ।
धेरैको एउटै गुनासो थियो, एन्फा र राज्यको नजरमा महिला फुटबल कहिल्यै परेन । बर्षको एउटा प्रतियोगिता खेलेर फुटबललाई अब निरन्तरता दिन सकिदैन ।
त्यसो भए के पर्खिएर बसेको त ? राष्ट्रिय टिमकी गोलरक्षक एन्जिला तुम्बाप्पाे शुब्बालाई एक भेटमा मैले सोधेका थिए ।
‘जिवनका एक पटक साफको उपाधि जितेर देखाउन मन छ ।’ उनले भनेकी थिईन् ।
एन्फाले दिने मासिक सात हजार तलबमा खेल जिवन अघि बढाईरहेका राष्ट्रिय महिला टिमका खेलाडीको प्रतिनिधित्व उनको आवाजमा थियो ।
मासिक सात हजार तलबमा काठमाडौंको महङ्गो दैनिकी चलाईरहेका महिला खेलाडी यतिबेला विराटनगरमा छन् । उनीहरुको एउटै सपना छ, साफको उपाधि जितेर देखाउने ।
सपनासंगै खेलाडीमा सबैलाई देखाईदिने ‘ईख’ जोडिएको छ । त्यही ‘ईख’ विराटनगरको सहिद रंगशालामा उपाधि यात्रामा निर्णायक बन्न सक्नेछ । र सोही उपाधिले महिला फुटबलको भविष्यको बिषयमा धेरै कुरा बोल्नेछ ।
महिला साफमा ६ देश सहभागि छन् । तर सबैको नजर एक खेलाडीमा बिशेष छ । उनी हुन्, नेपालकी सावित्रा भण्डारी । सबै देशका प्रशिक्षक उनको प्रशंसामा शब्द खर्चिन्छन् । हरेक फुटबल समर्थक उनको खेलमा मोहित छन् । ‘गोलको भकारी, सावित्रा भण्डारी’ लेखिएका ब्यानर विराटनगरको सहिद रंगशालामा ब्यापकै देखिन्छ ।
शुक्रबार भारतविरुद्व मैदान उत्रदै गर्दा सबैको नजर उनै सावित्रामा अडिएको हुनेछ । हरेक जितमा एक नायकको खोजी हुन्छ । भारतविरुद्वको उपाधि भिडन्तमा नेपालले खाजेको सावित्राको नायकत्व प्रर्दशननै हो ।
सावित्रा महिला फुटबलको ठुलो नाम बनेकी छिन् । उनले खेल कौशल र आत्मविश्वासबाट सबैको मन जितेकी छिन्, एउटा सम्भावना देखाएकी छिन् । अब पालो त्यही सम्भावनालाई साकार बनाउने हो । उनीप्रति गरिएको विश्वासलाई मैदानमा प्रमाणित गरिदिने हो ।
के उनी भारतविरुद्वको खेलमा सफल होलिन् ?
यक्ष प्रश्न यही बनेको छ ।
अघिल्लो महिना नेपाल र भारत भिडेका थिए, हिरो गोल्डकपमा । खेल नेपालले २–१ ले जितेको थियो । नेपालका लागि दुवै गोल सावित्राले गरेकी थिईन् । शुक्रबार हुने खेलमा सावित्राबाट सोही प्रर्दशनको अपेक्षा नेपाली फुटबलले गरेको छ ।
साफ उद्घाटनको अघिल्लो दिन विराटनगर झरेका एन्फा अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा काठमाडौंमा फर्किएका छैनन् । अध्यक्षमात्र होईन्, फुटबलका अधिकांश पदाधिकारी यतिबेला विराटनगरमै छन् । एन्फा आफैपनि उपाधिका लागि कति ‘ब्यग्र’ छ भन्ने बिषय पछिल्लो जमघटले देखाउँछ । आमुल परिवर्तनको नारा सहित नेतृत्वमा आएको वर्तमान टिम समेत उपाधि जितेर फुटबल राम्रो बाटोमा अघि बढिरहेको सन्देश दिन चाहन्छ ।
एन्फामा नयाँ नेतृत्व आउने बित्तिकै एक पछि अर्को घटना बाहिर आए, ती प्राय खराब समाचार थिए । सुशासन र पारदर्शीताको नारा सहित आएको नयाँ कार्यसमिति माथिनै भ्रष्ट्राचारको आरोप लाग्यो । फुटबललाई अस्थिर र बदनाम बनाउने कोशिश निरन्तर बाहिरबाट भए । समयसंगै धेरै भेदहरु खुल्दै जानेछन् । तर वर्तमान नेतृत्वलाई फुटबल सहि बाटोमा हिडेको सन्देश दिनुपर्ने दबाब छ । त्यो सन्देश मैदानभित्रको नतिजाले मात्र दिन सक्छ । त्यसैले सबैभन्दा बढी उपाधिको आवश्यक यतिबेला एन्फाको वर्तमान नेतृत्वलाई छ ।
कप्तान निरुले मागिन् माफी
साफको उपाधि भिडन्तमा कहाँ चुक्यो नेपाल ?
साफ उपविजेतालाई विराटनगर महानगरले जनही ५० हजार दिने
सावित्रा र ईन्दुमती सर्वाधिक गोलकर्ता
‘हारको सबै जिम्मेवारी म लिन्छु’
नेपाललाई हराउँदै भारत साफ च्याम्पियन